Olona 15, farafahakeliny, maty tamin'ny tondra-drano amerikana avaratra atsinanana
Home » Lahatsoratra farany farany » Safety » Olona 15, farafahakeliny, maty tamin'ny tondra-drano amerikana avaratra atsinanana
Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Vaovaom-panjakana • Hospitality Industry • Vaovao • People • fanorenana • tompon'andraikitra • Safety • Tourism • Dinika fizahan-tany • Fitaterana • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • malaza ankehitriny • Etazonia Vaovao Vaovao • Vaovao isan-karazany
Tamin'ny mitatao vovonana dia olona 20 no maty voamarina, ary maty ny olona maromaro tany New York, New Jersey, Pennsylvania, ary iray tany Maryland.
Amerikanina avaratra atsinanana nohon'ny tondra-drano lehibe.
Ireo sisa tavela amin'ny rivodoza Ida dia nanapaka lalana mahafaty namakivaky ny avaratra atsinanan'i Etazonia.
Ny governoran'i New York sy New Jersey dia manambara fa misy ny vonjy taitra.
Ny rotsak'orana be dia be dia namaky ny faritry ny tanànan'ny New York City Alarobia alina ka hatramin'ny Alakamisy, izay nitarika fahafatesan'olona marobe, satria ny sisa tavela tamin'ny rivodoza Ida dia nanapaka lalana nahafaty namakivaky ny avaratr'i Etazonia.
Ny governoran'i New York, Kathy Hochul dia nanambara fa misy fepetra maika satria ny sisan'i Ida dia nahatonga tondra-drano lehibe tany New York City sy ireo faritra hafa ao amin'ny fanjakana.
Ny governoran'i New Jersey Phil Murphy dia nanambara ihany koa ny fanjakana maika hamaly an'i Ida, toy ny nataony New York City Ben'ny tanàna Bill de Blasio tamin'ny vao alina.
Ny isan'ny maty dia nisondrotra tontolo andro ny alakamisy satria nanomboka takatr'ireo tompon'andraikitra ny haben'ny fahavoazana. Tamin'ny mitatao vovonana dia olona 20 no maty voamarina, ary maty ny olona maromaro tany New York, New Jersey, Pennsylvania, ary iray tany Maryland.
Ny telo tamin'ireo namoy ny ainy dia nitranga tao amin'ny tokantrano tokana ny New York City Borough of Queens. Ireo mianakavy telo, isan'izany ilay zazalahy 2 taona, dia maty tsy tra-drano teo amin'ny manodidina an'i Flushing. Nisy roa hafa maty tany amin'ny manodidina an'i Jamaika rehefa nianjera tamin'ny rindrin'ny tranony ny tondra-drano.
Fahafatesana efatra indray no nitranga tao amin'ny trano sarotra iray tao Elizabeth, New Jersey, hoy ny tatitra nataon'ny AP. Ny ben'ny tanànan'i Elizabeth dia efa nitatitra fatin'olona dimy tao amin'io toerana io.
Tao amin'ny faritry Philadelphia lehibe, fatin'olona telo farafahakeliny no nohamafisin'ny tompon'andraikitra, anisan'izany ny fahafatesan'ny vehivavy iray voadonan'ny hazo nianjera tao amin'ny tanànan'i Dublin Ambony.
Tany Rockville, Maryland, tovolahy iray 19 taona no namoy ny ainy tamin'ny tondra-drano tao amin'ny Rock Creek Woods Apartments, Twinbrook Parkway. Raha ny filazan'i Fox5 dia nanandrana nanampy an-dreniny ilay rangahy rehefa nindaosin'ny rano izy.
Betsaka ihany koa ny olona namoy ny ainy tao anaty fiara, tranga mahatsiravina koa izay nahafaty mpamily iray farafahakeliny tany Passaic, New Jersey. Raha nirohotra namakivaky ny arabe tao an-tanàna ny rano, dia mpitondra moto iray 70 taona no nindaosin'ny rano rehefa voavonjy ny fianakaviany.
Ny hetsika toetr'andro manan-tantara toy izany dia nahatonga ny biraon'ny National Weather Service (NWS) New York hamoaka ny fampandrenesana vonjy taitra voalohany noho ny tondra-drano, satria ny iray dia navoaka ho an'ny avaratr'i New Jersey ary avy eo ny iray hafa dia navoaka ho an'ny faritra ao New York City. Ny fanairana dia natokana ho an'ny toe-javatra mampidi-doza amin'ny tondra-drano, ary ampiasaina amin'ny "toe-javatra tsy fahita firy rehefa misy oram-be mivatravatra atahorana loza mitatao amin'ny ain'ny olona sy ny fahavoazana mahatsiravina," hoy ny NWS.